China Kraft Paper Yima Up Isikhwama ifektri abakhiqizi | Hong Bang
Kraft iphepha sukuma sikhwama
Isikhwama sephepha lokuma yisitayela semakethe esithandwa kakhulu emakethe ngoba lolu hlobo lokupakisha luyahlukahluka futhi lusebenza futhi luyakhanga. Njengoba igama ngokwalo liphakamisa, lezi zikhwama ziyakwazi ukusukuma kuyo yonke indawo eqinile. Inekhono elihle lokubonisa ishelufu futhi banganciphisa izidingo zesitoreji futhi bandise isikhala seshalofu. Imvamisa, isikhwama sokusukuma sisetshenziswa kakhulu ku-snack, i-condiment, ubucwebe, itiye noma ukupakisha kwekhofi. Izici zesikhwama sokusukuma
isikhwama sokusukuma senziwa kusuka ezingxenyeni eziningana zezinto zokuvimbela ezingahlukaniswa ngamaqembu amakhulu ayi-3, ahlangana ukuhlinzeka ngesikhwama ngezici eziqinile nezimelana nokubhoboza. Lawa maqembu ama-3 yilawa:
ungqimba olungaphandle: luvumela ukuphrinta kwemidwebo ukwenzeka, okuphethe ukukhangisa okudlulisa umlayezo womkhiqizo nokuheha abathengi.
ungqimba ophakathi nendawo: usebenza njengomgoqo wokuvikela ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kwesikhwama kugcinwa kuphephile futhi kuhlanzekile.
ungqimba lwangaphakathi: ungqimba olubaluleke kunazo zonke phakathi kwalokhu okuthathu. Lolu ungqimba ngokuvamile luvunywa nge-fda ukuqinisekisa ukuthi ukudla kuphephile lapho uhlangana nokupakisha. Futhi kuyabekwa ukushisa ukuqinisekisa amakhasimende ukuthi isikhwama asiphazanyiswanga.
isikhwama sokusukuma sivumela nezici ezenziwe ngokwezifiso ezinjengeziphu, izimbobo eziphezulu, izinothi zokuklebhula kanye nama-spouts okuthuthukisa ukuphepha kokusebenza kwayo kanye nekhwalithi ephezulu kuzoba yisimiso sethu sokuqala. Yonke imikhiqizo yethu yenziwa ngezinto zebanga lokudla okusho ukuthi ifilimu esiyisebenzisayo, uyinki nomugqa wokukhiqiza ukuphepha okungu-100% kuwo wonke umuntu omdala ngisho nengane. Ngaphezu kwalokho, siqinile ngekhwalithi okusho ukungabekezeleli nhlobo kwanoma yiluphi uhlobo lokuyekethisa olubonisa ekwakhiweni okuqinile, ukuqina komoya nokuphrinta okucacile. Ukupakisha umdlalo obucayi futhi ophelele ngokufunwa kwamakhasimende kuyohlale kuyinjongo yethu.
isici sokuma sikhwama
iphunga ubufakazi bokukhanya kobufakazi
ukuvuza kwefasitela lokutholakala kwangaphandle okunobungane be-vivi design izinto ezingasetshenziswa eziguquguqukayo
isisindo esincane nokuphatheka akukho mdlalo wokulinganisa okulula ukusukuma
bpa, lead, pvc, design phthalate-free futhi ngezifiso
nayi ukupakisha kwe-hongbang. Sinikeza izixazululo ezahlukahlukene zokupakisha kokudla ngezidingo ezahlukahlukene nokusetshenziswa. Ukukhiqizwa kwethu kwamukela noma yiziphi izinhlobo zomkhiqizo wangokwezifiso. Singenza umkhiqizo wakho ubukeke ngokwehlukile njengobuso be-matte, indawo ecwebezelayo noma ubakhombise ndawonye kupakethe. Sitshele imfuneko sakho sizohlangabezana nazo zonke izinhlobo zezidingo zakho. Asenzi imikhiqizo futhi sizama ukukuyisa kuyo; silalela izidingo zakho nobunjiniyela obusha obuzoxazulula izinselelo zakho zokupakisha.
amasevisi newaranti sineqembu elisebenza kahle lamakhasimende ukuphendula nokuxazulula imibuzo kungakapheli amahora angama-24. Icala ngalinye lizoba nomuntu othize ukuqinisekisa ukuthi ukwakheka, ubuningi, ikhwalithi nosuku lokulethwa kuyafana nemfuneko. Siyathanda ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezihamba phambili futhi sinikeze ukusekelwa okuningi kumakhasimende ethu.
Langaphambilini Ukulethwa Ngokushesha Kokupakisha Kwokudla Kwesiko - Isikhwama esimhlophe sephepha lesikhwama esiphansi seFlat - Hong Bang
Olandelayo: Isikhwama sokudla kwezilwane ezifuywayo
Ukuphrinta Kwamafilimu Okuphrintiwe Kwesiko kwe ...